Esikhathini 20s kwekhulu elidlule emzini wase-US-Los Angeles uvele Hollywood ifilimu studio. It elaliyinhlanganisela wangempela eziningi ejensi, studios, ifilimu nama emadokodweni. Inani labantu base-America ngiswele okuthuthuka ngokomoya, futhi Hollywood eseqala ukuveza amafilimu ngezinga ezimbonini. ukukhiqizwa Film yafakwa ekusakazeni. Producer isikhungo eziqhutshwa isikimu olususwe: iskripthi, ekubunjweni, ukudubula, ukuhlela, ukunyathelisa futhi ekugcineni, Ukuqashwa kwe-movie.
Okokuqala kwakunganele izindima abadlali Hollywood. Amaskriphthi zalotshelwa ngokushelela, futhi kwakungekho muntu ukudlala. Hollywood abadlali - amadoda, uhlu okuyinto Wayenesizotha kakhulu, wayengasenakukwazi ukubekezelela imisebenzi. Khona Hollywood ejenti bahlakazeka kulo lonke amazwe beyofuna enhle, abantu abanamakhono. Imiphumela ngokushesha: ngokushesha izinto eziningi ezanele babe Hollywood abadlali (abesilisa nabesifazane kamuva). waqala Ukukhiqizwa movie adumile.
Keri Grant (Archibald Alexander Leach), i-superstar cinema American, owazalwa ngo-1904. Demand umlingisi Kwakuyintokozo yodwa, it is hhayi ngokwenyama naso isikhathi inkanyezi kule amafilimu ayinikezwa. Famous Hollywood abalingisi, amadoda, futhi ngezinye izikhathi abesifazane, wahlushwa ngenxa yokuthandwa kwayo, wabonakala ngokushesha. Nokho, babefuna badlale abalingiswa abaningi ngangokunokwenzeka.
Ukusebenzisa funa kwalo okungakaze kube khona, Grant usayine inkontileka ukuba Warner Bros. "Liza Kuqala Umfanekiso" ngemibandela ukuthi wamnika esifanele sokuthatha isinyathelo kumafilimu ukuncintisana studios. Lokhu ingenzeka kanjani lo mkhuba ngisho cinema izwe elingabafanele bona. Ngokuvamile, Hollywood abadlali (amadoda) akazange abe izimo zabo, lokhu kuphela eyayenziwa abesifazane. Noma kunjalo, ukuphathwa "Paramount" bavumelana. Kodwa Keri Grant ngohlelo yakhe ngokungagcini nje iwine, ukuphatheka kabi kangakanani, ngoba zonke zokuqoka yayo ku "Oscar" yayiyize wayengezwanga wathola noma yimuphi umklomelo athandwayo. Akekho inkampani ifilimu, lapho ayesebenza khona njengoba kumdlali, akazange alinge ukusekela igama lakhe.
Carey yathathwa ikakhulu amahlaya, futhi ngezinye izikhathi kwaba farce. Ngo-1940, uGrant kudlalwa Dexter Haven e ifilimu Dzhordzha Kyukora "I-Philadelphia Story" futhi izinkanyezi ku ifilimu "Kuphela inhliziyo engenabantu" eminyakeni emibili kamuva. Phakathi nawo-40s Keri Grant wahlangana Alfred Hitchcock futhi idlalwe izindima kumafilimu ambalwa zokubhala yakhe. Okokuqala, kwaba isithombe "notoriety" umqondisa David O. Selznick, lapho Grant abadlale indima Devlin, umenzeli FBI. Khona-ke Carey izinkanyezi ku-movie "Ukuze Catch Isela" kuqondiswe yi Hitchcock yena. Ekugcineni, ngo-ifilimu "North ngu Northwest" Keri Grant abadlale indima Roger Thornhill. Le Umdwebo kwandulelwe ukugunyazwa okwenziwe uchungechunge "James Bond". Bamba iqhaza ifilimu 007 like nabalingisi best Hollywood. Abesilisa nje waphupha ngakho.
ukuphila Siqu Cary Grant ufanelwe ingxoxo ehlukile. Wayeshadile kahlanu, nomsebenzi walo kwandisa kuphela ubudala. Nokho, umlingisi kuyinto indodakazi eyodwa kuphela, Jennifer.
Ethandwa Hollywood umlingisi George Timoti Kluni wazalwa Meyi 6, 1961 ku Lexington. Yena baziwa kakhulu ngokuba ngenxa yochungechunge oluthi "ER" lapho ayedlala Dr. Doug Ross. Umsebenzi Clooney kuqala movie kwaba ifilimu "Kusukela Ukuhlwa Till Dawn," iqondiswe Robert Rodriguez, lapho uGeorge odlale isigebengu uSeti Gecko. umlingisi Filmography ekuhlaba umxhwele kulo imidwebo engaphezu kwengu-60. Kuthiwa imibhalo eminingi ye imiklomelo Dzhordzha Kluni iseduze amabili. Phakathi nenkonzo yakhe yokuba wathola amabili "Oscars", ezintathu "Golden Globe", umklomelo MTV Movie Awards, imiklomelo emine kusukela uMkhandlu kaZwelonke US baxgeki, imiklomelo emine zanikwa Dzhordzhem Kluni wase-Venice Film Festival, futhi ekugcineni kusukela European udwi otshekele kwesokunxele yethulwa kuye ezimbili Umklomelo. Abadlali ethandwa kakhulu ku Hollywood, abesilisa nabesifazane, uhalalisele Clooney impumelelo ezethulweni yakhe.
ukuphila Siqu George - eliqinisekisiwe impohlo ukuphila. Wayefanele intombi eseceleni eziningana, kuhlanganise Kelly Preston futhi Dzhuliya Roberts, Renee Zellweger futhi USindi Krouford. Umlingisikazi Nicole Sheridan waprofetha umshado Clooney kodwa ngosuku lwakhe lokuzalwa wamashumi amane, yaze wenza ukubheja naye ngale ndaba, ukunikela ayizinkulungwane 15 zamaRandi kusengozini. Lapho Clooney eneminyaka engu-40 futhi namanje waphaphama ukuthi impohlo usuku, Sheridan wamthumela isheke lemali elahlekile. Nokho, George akalithabathanga imali, ukuthumela sesheke ngenothi "ukunikeza imali ungathathi." Hollywood abadlali - amadoda, ngokungafani abesifazane, abekho ezisheshayo uzobopha elikasofasilahlane.
Lo mlingisi ethandwa, inkanyezi okunjengalokho lokuqala, Eldred Gregory Peck yazalwa ngo-April 5, 1916 California edolobheni La Jolla. Esikhathini 40s kanye 60s kwekhulu elidlule kwaba omunye likufuna abadlali abaningi. Engumnikazi imiklomelo ehlonishwayo, kuhlanganise "Oscar" futhi ambalwa "Golden Globe". Umsebenzi ku Hollywood kwaqalwa Gregori Peka nge ifilimu "I izihluthulelo zombuso", wathwebula 1944 waletha umlingisi Inkanyezi isimo. Nokho, iyaduma, kuba isifo lezinkanyezi akazange agule. Kuze kube sekupheleni kokuphila kwakhe ukukhuluma nabantu abavamile, wahamba ezweni lonkana ngohlelo yayo "Izingxoxo nabantu Gregory Peck." Lo mlingisi wavela ezithombeni iminyaka engu-50, futhi Filmography yakhe ihlanganisa imidwebo ngu-60.
ukuphila Siqu Hollywood superstar Gregori Peka organically ngokwanele, nonkosikazi wakhe wokuqala kwaba Greta Kukkonen, uFinn ngokuzalwa. Kule umshado Wayenamadodana ezintathu. Ngemva kweminyaka engu-nantathu womshado, umbhangqwana uhlukana. Kwesonto ngemva kokuhlukanisa kusukela Greta Gregory Peck washada Veronike Passani, intatheli kusukela iphephandaba lesiFulentshi. umlingisi ukuba ibuye emshadweni wayo wesibili uzalwa unezingane ezimbili, indodana nendodakazi. Veronica kwaba nomyeni wakhe kuze ngosuku lwakhe lokugcina.
Hollywood movie star '50s futhi' 60s Toni Kertis (Bernard Schwartz) wazalelwa June 3, 1925, eNew York. Iqhaza lokuqala lezinkanyezi Curtis kwaba zomlando ifilimu "AmaViking" iqondiswe Richard Fleischer, lapho kudlalwa Indodana engumlanjwana ka Queen of England, u-Eric. Owesibili ezibaluleke kakhulu kubhekwa ifilimu "uSpartacus" Stenli Kubrika, lapho Toni Kertis abadlale indima enkulu ka-Antonia. Le filimu wathola Oscar kokuphakanyiswa kwamagama ezine kodwa Curtis akazange icindezelwa. A udumo embulungeni yonke umlingisi ozotholwa ngokusebenzisa comedy "Abanye Like It Zezıhlabane," kuqondiswe yi Billi Uayldera, wathwebula 1959. Hollywood abalingisi, amadoda ngokuvamile kugwenywe kugucuka efomini besifazane, kodwa Curtis indima kuhlulekile. Nokho, ngemva lokhu ifilimu yena okunenkanyezi izindima ezihlukahlukene kuze 70s zakuqala, ukuthandwa wangaphambili wayengekho, izimemo yayiya ekupheleni umlingisi yazihlanganisa amaphrojekthi ithelevishini.
ukuphila Siqu Toni Kertisa yisibonelo ubuqotho, naphezu kweqiniso lokuthi anakho imishado eziyisithupha. Nge bonke abafazi bakhe ngemva kokwehlukana Tony lisaqhubeka nobudlelwano friendly, babasize ngazo zonke izindlela futhi esekulungele ukuba basisize ikholi kuqala. Curtis ukuba ibuye emshadweni wayo wokuqala sinendodakazi Dzheymi Li Kertis, actress ethandwa.
Omunye abadlali enkulu cinema wazalelwa e-Los Angeles, July 1, 1924. Waba abadumile indlela bemibono lokusungula, emsebenzini wakhe wasebenzisa indlela Stanislavski. Waqala inkambo yakhe esiteji, seziqalile ukusetshenziswa yayo ngo-1944 endaweni play okukhulu "Ngikhumbula umama." ukuqashelwa Emhlabeni wonke ngo-movie Brando wathola indima yakhe njengomPristi Stenli Kovalski e "A yomgwaqo" Isifiso ", udutshulwe umqondisi Elia Kazan play by Tennessee Williams. Esikhathini 50s, UMarlon Brando ayebhekwa uphawu ubulili consummate, futhi indima yayo.It ungumbonisi inkomba oyibamba. Laziwa Hollywood abadlali - amadoda, kuhlanganise u-Omar Sharif, uRobert De Niro, Al Pacino, - wazama ukulingisa Brando e "tango Kugcine e Paris," "umuntu onamandla angaphezu kwawemvelo" futhi "Apocalypse manje" kuwumsebenzi omuhle kunayo yonke umlingisi umdwebo "On the Waterfront".. futhi "Godfather Ubaba "Brando waklonyeliswa imiklomelo emibili" Oscar "futhi" Golden Globes. "
UMarlon empilweni yakho yaqala nge wathandana Marilyn Monroe. Futhi ngemva kweminyaka emibili washada actress Anna Kashfi, umshado waphula ngo-1959. Ngemva kwalokho Brando lalingesinye owakwakhe ezimbili. Three abafazi umlingisi ozalwa nezingane ezinhlanu: Christian, Miko, Rebecca, uSimon Tarita. Ngaphezu izingane bomdabu, UMarlon wayenamadodakazi ezintathu ekungeyona eyakhe.
Hollywood umlingisi, umqondisi kanye umkhiqizi Robert Redford Wazalwa ngo-August 18, 1936 emzini wase-California Santa Monica. Libhekene ukuzinikezela ubungcweti, isethi wasebenza ngaphandle Stunt. Kungakhathaliseki izimo: ukungcola, imvula, ewa entabeni noma edonsa ezandleni amatshe asindayo - zonke iziqephu wathwebula umlingisi yena. Babaziwa Ngokungenisa amafilimu "Bonke sikaMongameli," "Butch Cassidy kanye Sundance Kid," "The Sting" "Three Emalanga Condor," "Abantu Abavamile." Lapho izimo zinzima ngokwedlulele, Robert eyasiza ukuqeqeshwa okuhle wezemidlalo. Athletic Radford kalula sibhekane ngokuphumelelayo namaqhinga eziyinkimbinkimbi ku isethi. Redford bayahlonishwa nabalingisi amahle kunawo Hollywood. Abesilisa babemhlonipha, kanye nabesifazane ababemkhalela nje crazy mayelana handsome.
ukuphila Siqu Robert Redford akuyona ezahlukene kakhulu kunaleli iningi Hollywood abadlali. Ngo-1958 washada kaMomoni Lole Dzhin Wagenen ka Salt Lake City. Nakuba Robert asithandayo imidwebo, futhi njengoba umdwebi weqiniso ngokuvamile lalisetshenziselwa ibhodlela. unkosikazi Young wahlushwa ke, futhi ekugcineni wakwazi wean umyeni wakhe ekubeni umlutha. Lola wazala izingane ezine, amadodana amathathu nendodakazi eyodwa. Okwamanje Robert Redford has abazukulu ezinhlanu. Nge Lola yena ohlukanisile ngo-1985, futhi Ngashada nentombi ongumakad 'ebona Sibylle Stsagarrs.
Uilyam Bredli Pitt, obe yimpumelelo Hollywood umlingisi umkhiqizi, ozalwa 18 Disemba 1963 emzini wase-US Shawnee, Oklahoma. Ukuzama ukuzivocavoca amaphupho abo obusha, Brad ngo-1987 saya ku-internet Onezinwele ezimhloshana. Ubuhle wamsiza ukuba athole ambalwa kancane izingxenye, futhi njengoba isikhathi eside elapho, wayeya esebenza amakilasi emzini wakubo, bese kudlalwa efanele ngokwanele. Pitt livele, futhi saya ngonyaka olandelayo wathenjiswa indima abaholayo ifilimu "The Dark Side of the Sun", lapho kudlalwa Rick Clayton. Khona-ke, e-career Brad sika kwadingeka izindima eziningi ehola, bonke Filmography yakhe ivela imidwebo engaphezu kwengu-60. Lo mlingisi unqobile indondo "Oscar", ayamukela njengendlela producer kulo nyaka ngoba ifilimu "12 Iminyaka Uyisigqila" kusigaba "Kuhle Film". Kukhona umklomelo "Golden Globe" credit yakhe ngokubamba kwabo iqhaza ifilimu "Monkeys 12".
ukuphila Siqu Breda Pitta kwaba ngempela ezolile. Wahlangana nge actress Gvinet Peltrou ku isethi movie "Eziyisikhombisa", kwathi ngo-1995, unyaka. Affair waqala, ngonyaka abathandi yamemezela ukuzibandakanya kwabo. Kodwa umbimbi 1997th ngokuzumayo zigoqiwe ngaphansi kwezimo engaqondakali. Ngo-2000, u-Brad Pitt washada actress Dzhennifer Eniston umshado eyathatha iminyaka emihlanu, kusukela ngo-2005 Bona abahlukanisile. Esikhathini eside ngaphambi kokuba isehlukaniso, Brad baqala ukuqomisana Angelina Jolie kamuva owaba inkosikazi yakhe.
Manje American "Dream Factory" luyachuma. US umkhakha ifilimu liye lasinda Yokuwohloka Okukhulu, oye wamelana izimpi zezwe eziningana, inani amafilimu ngezinkulungwane. Hollywood main reference iphuzu ngoba zonke studios ifilimu zomhlaba, kuba Mecca real cinema.